site ha na 21-01-03
N'afọ ndị gara aga, anyị sonyeere ọkachamara EPS igwe ngosi na Jordan, Vietnam, India, Mexico na Turkey wdg Mba. N'iji ohere nke ihe ngosi ahụ, anyị zutere ọtụtụ ndị ahịa ndị zụrụrịrị igwe EPS n'aka anyị ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe m ...
ICF, Mpempe akwụkwọ a gwara agwa, na ndị China na-akpọkwa ya nkewapụ EPS modul ma ọ bụ EPS blocks. E mere ya site EPS udi ịkpụzi igwe na ICF ebu. Kinddị ụdị modulu EPS a dị oke mma na mkpuchi ọkụ na mkpuchi mkpuchi. A nwalere ikike nchekwa nke ...
Akwụkwọ akụkọ mberede Coronavirus kwusara azụmahịa ụwa. Ọtụtụ ndị ahịa na-echegbu onwe ha na ha enweghị injinia iji wụnye ma ọ bụ mezie igwe ndị ha zụtara n'aka China. Ee, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa nwere nsogbu a, mana ọ bụghị na ụlọ ọrụ anyị, n'ihi na na mgbakwunye na ndị injinia China, anyị .. .